Ambassador Madeira oo ku dhawaaqay ballanqaad muhiim u ah Dowladda Soomaaliya – Maanta Online
Ambassador Madeira oo ku dhawaaqay ballanqaad muhiim u ah Dowladda Soomaaliya
Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira ayaa ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya, ammaanka, bani’aadaminimada, mashaariicda oo sanadkii la soo dhaafay ay gaareen ciidamada AMISOM iyo arrimo kale.
Francisco oo u waramayay idaacadda Qaramada Midoobay taageerto ee lagu magacaabo Radio Ergo ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay ee 2019-ka guulaha la gaaray ay ka mid tahay xoreynta degaanno ururka Al-Shabaab gacanta ku hayay, isla markaana mashaariic kala duwan ka fulinay.
“Sanadka cusub waxaa noo qorsheysan inaan ku guuleysano qorsheyaasheena, maadaama sanadkii hore ay noo qabsoomeen qeyb ka mid ah howlaheena” ayuu yiri wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo sheegay in ciidamada Booliska ah ee AMISOM mashaariicdaasi ka qeyb qaateen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen shacabka goobaha ay ku sugan yihiin.
Waxa uu sheegay in rajada dalka Soomaaliya dib u soo kabanayo, wuxuuna beesha caalamka ugu baaqay inay kordhiyaan taageeradooda kala duwan si ay cagaheeda dib isugu taagto.
“Sanadka cusub waxaa noo qorsheysan inaan awooda ku wareejino ciidamada Dowladda” ayuu yiri ergeyga Qaramada u qaabilsan Midowga Afrika oo ka hadlay waxqabadka ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM.
Dhinaca kale hadalka Ambassador Madeira ayaa ku soo beegmaya xilli ururka Al-Shabaab uu kordhiyay dagaalada iyo weerarada uu ka wado dalalka Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo weeraradii ugu dambeeyay ee uu qaaday ay ka mid tahay saldhigga ciidamada cirka oo ku yaala gudaha dalkaasi Kenya sanadkan cusub ee 2020-ka oo Al-Shabaab sheegatay inay ka dambeysana uu ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sanadkii hore ee 2019-ka dhacdooyinka ugu weyn oo Al-Shabaab fulisay waxaa ka mid ahaa qarax ay ku weerartay xarunta maamulka gobolka Banaadir, kaasi oo ay ku geeriyoodeen xubno uu ka mid ahaa AUN Guddoomiyihii gobolka Eng. C/raxmaan Yariisow, iyadoo dowladda Federaalka sheegtay qaraxaasi inay fuliyeen laba gabdhood.
Falka ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir oo siyaabo kala duwan looga hadlay ayaa waxaa ka dhashay in su’aalo fara badan laga keeno habaca dhinaca amniga ah ee ku yimid xarumaha dowladda, iyadoo markaasi kaddibna ku dhaqaaqday inay xoojiso nidaamyada lagu qaadanayo shaqaalaheeda rayidka ah.
Si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa la filayaa in sanadka dambe ee 2021-ka dhacdo doorasho aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin nooceeda, iyadoo ay socdaan dadaallo kala duwan oo loogu jiro inay noqoto mid qof iyo cod ah xilli ururka Al-Shabaab gacanta ku hayo qaar ka mid ah gobolada dalka oo aanay suuragal ahayn inay ka dhacdo afti dadweyne.
Aqalka hoose ee Golaha Baarlamaanka federaalka ayaa dhowaan ansixiyay shrciga doorashooyinka, iyadoo loo gudbiyay aqalka sare ayaa haddii ay ansixiyaan u sii gudbaya madaxtooyada Villa Somaliya si uu u saxiixo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaasi oo si rasmi ah loo fulinayo sharcigaasi.
Inkasta oo maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland hoggaamiyeyaashooda sanadkaan cusub ee 2020-ka waxay la kowsadeen iyagoo dacalka heystaan khilaaf gaamuray oo keenay in Soomaalidu kahsato hab maamulka nidaamka ku cusub dalka ee Federaaliga ah kaasi oo sii xoogeysanayay wixii ka dambeeyay dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ee KMG ahayd kana kahor yimaadaan howlaha dowladda dhexe iyagoo cuskanaya sharciga dalka iyo kan maamul goboleedyada.
Dhinaca kale maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa olog la ah dowladda dhexe, halka maamul goboleedka Galmudug oo isna ay ka socoto xulista xildhibaanada Baarlamaanka labaad dhowaan ee Galmudug-ta cusub dadaal xoogan geliyay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre, isagoona ku guuleystay inuu meesha ka saaro tabashooyin iyo khilaafyo hareeyay dhismaha maamul cusub oo laga hirgeliyo gobolada dhexe ee dalka.
← Shacabka Muqdisho oo shaki weyn geliyay cunista Kalluunka (Yaa ka dambeeyay beenta la faafiyay?)
Askar baxsad ka ah Axmed Madoobe oo dagaal la galay Milateriga DFS →
Feysal Cali Waraabe: “Madaxdii aan la kulmay waxaan isku afgaranay in la badbaadiyo Soomaaliya iyo Somaliland”